Daawo Sawirro:-Wakiilka IGAD oo ka kulmay Xildhibaanada Federaalka ee laga soo doortay… | Koonfur Galbeed News
HomeArimaha GudahaDaawo Sawirro:-Wakiilka IGAD oo ka kulmay Xildhibaanada Federaalka ee laga soo doortay…
Daawo Sawirro:-Wakiilka IGAD oo ka kulmay Xildhibaanada Federaalka ee laga soo doortay…
Wafdi ka socda Urur Goboleedka IGAD oo Magaalada Kismaayo ee Caasimada KMG ah ee Jubbaland u jooga si ay ugu kuur galaan habsami u socdka doorashooyinka Jubbaland ayaa maanta la kulmay Xildhibaanada labada Aqal ee federaalka ah oo deegaan doorashadoodu ay tahay Jubbaland.
Wafdigan oo uu hogaaminayo wakiilka IGAD ee Soomaaliya Dr.Maxamed Guyow ayaa Xildhibaanadan ka dhagaystay aragtidooda la xiriira sidii ay Jubbaland uga dhici lahayd doorasho xor iyo xalaal ah oo dhamaan dadka ree Jubbaland ay ku qanacsan yihiin iyadoo la raacayo sharciyada iyo hanaanka u dagsan Jubbaland.
Xildhibaanada ayaa sheegay in ay ku qanacsan yihiin sida ilaa hada howlahu ay u socdaan isla markana gudiga madaxa banaan ee xuduudaha iyo Doorashooyinka Jubbaland laga sugayo in si habsami leh ay doorashooyinku ku dhacaan.
Waxaa xildhibaanadu ay sheegeen in ay ka walaacsan yihiin sida indho la’aanta ah ee Dowlada Federaalku iskugu dayayso in ay fara galiso hanaanka doorashooyinka Jubbaland taas oo wixii ka dhasha ay masuuliyadeeda qaadayso Xukuumada Federaalka ah ee Soomaaliya.
Magaalada Kismaayo ee Caasimada KMG u ah dowlad Goboleedka Jubbaland ayaa dhawaan waxaa lagu wadaa inay ka dhacdo Doorashada Guddoomiyaha Baarlamaanka iyo mida Madaxweynaha maamulka Jubbaland.